‘लक्की’ रोनाल्डो ! | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
| 203 Views | Published Date : 21st June 2018 |
काठमाडौं । रुसमा भइरहेको २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबलमा पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोको खेलको विषयमा लिएर सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको छ । गोल्डेन बुटका प्रमुख दावेदार रोनाल्डोले दुई खेलमा चार गोल गरिसकेका छन् । स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिक र मोरक्को विरुद्ध एक गोल गरिसकेका रोनाल्डोको टिम राउन्ड अफ सिक्सटिनका लागि आतुर रहेको छ ।
तर समूहको अन्तिम खेलबाटै यसको टुंगो लाग्नेछ । दुई खेलबाट ४–४ अंकका पोर्चुगल र स्पेन शीर्ष दुईमा छन् । इरानको ३ अंक छ भने अंकविहिन मोरोक्को बाहिरिइसकेको छ । अन्तिम खेलमा पोर्चुगलले इरानसंग र स्पेनले मोरोक्कोसंग खेल्नेछ । रोनाल्डोले जसरी अहिले खेलेका छन् उनको खेललाई भने राम्रो भन्दा पनि लक्की खेलाडीका रुपमा लिइएको छ । स्पेनविरुद्ध खेल्दा पोर्चुगलले राम्रो खेल पस्केको थिएन । स्पेनको प्रशंसा भएको थियो । तर लक्की सावित भए रोनाल्डो । तीन गोल गरे ।
मोरोक्को विरुद्धको खेलमा पनि न त पोर्चुगलले राम्रो खेल्यो न त रोनाल्डोले । तर चौथो मिनेटमै गोल गर्दै पोर्चुगलले खेल १–० ले जित्यो । मोरोक्कोले गोलका लागि थुप्रै प्रयास गर्यो । ४ वटा गोलका लागि प्रहार गरेको थियो । तर फिनिसिङ हुन नसक्दा अल्मलियो ।
मोरोक्कोले खेल अवधिमा पोर्चुगललाई पेलेको थियो । रोनाल्डो कप्तान भइकन पनि रणनीति बदल्न सकेनन् । ‘फेयर प्ले’ भने पनि पोर्चुगलले १९ फाउल गरेको थियो । त्यस्तै मोरोक्कोले २३ फाउल गर्यो । एकै खेलमा ४२ फाउल ? फेयर प्ले खेल्न पोर्चुगलले नसके पनि के रोनाल्डो लक्की सावित हुँदै गोल्डेन बुट जितका लागि आतुर देखिएका हुन् त ?
अहिलेसम्म रोनाल्डोलाई काउन्टर दिन रुसका डेनिस जाजिन्स्किी आएका छन् । उनले ३ गोल गरेका छन् ।